अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवस: कर्णालीमा चुनौति छिचोल्दै उज्यालाेतिर — Breaking News, Headlines & Multimedia
सरस्वती गौतम बैशाख ३०, २०७७ डिन नर्सिङ विभाग कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला
सन् २०२० मे १२ मा विश्वभर अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाईएको छ । यो वर्ष कोरोना भाईरसका कारण भईरहेको लकडाउले औपचारिक कार्यक्रम नभएपनि नर्सिङ पेशामा लागेका व्यक्तिहरु, सरोकारवालाहरुले यो दिवसलाई विशेष गरेर सम्झिएका छन् । सो विषयमा कर्णालीमा बसेर नर्सिङ पेशामा काम गर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ डिन सरस्वती गौतमसँग कोरपाटीका प्रधानसम्पादक नेत्र शाहीले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
१. सर्वप्रथम अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा यहाँलाई हार्दिक शुभकामना तथा नमस्कार ।
तपाईलाई पनि नमस्कार एव. धन्यवाद ।
२. नर्सिङ दिवस किन मनाउछन् ? यसको महत्व के छ ?
आज नर्सिङ दिवस नर्सिङ पेशाका जन्मदाता फ्लोरेन्स नाईटिङ्गेलको जन्म भएको दिन हो । उहाँले यो मानवजातिका लागि गर्नुभएको मार्गदर्शनका लागि सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण नर्सहरुको तर्फबाट स्मरणहित हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँ जन्मेको दिनलाई संसारभर यो दिवस मनाईदै गरिएको छ । नर्सिङ पेशाको महत्ववारे नबताउनु पर्ला जहाँ बिरामीको हेरचाह गर्न महत्वपूर्ण पेशा पनि हो । यदि बिरामीलाई हेरचाह नभएमा हालत के होला ? यसैले यो सेवाको मुल्य र महत्वसँगै आजको दिनको महत्व पनि उत्तिकै बढि छ । यो कोरोना महामारीको समयमा पनि नर्सको योगदानको मूल्यको मापन छैन । कुनैपनि महामारीको समयमा नर्सहरुको काम अग्रपंक्तिमा हुन्छ र अहिले पनि छ ।
३. कर्णाली र प्रतिष्ठानका के के कामहरु भईरहेका छन् ?
म पहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सहप्रध्यापकको रुपमा काम गरिरहेको थिए । अहिले दुई वर्ष भयो कर्णालीमा काम गरिरहेको छु । कर्णालीबाटै नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनदेखि सेवा गर्ने काममा तीव्रता लिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यात्रामा म पनि थपिए । अहिले स्टाफ नर्स र नर्सिङ मिडवाफेरी ९दक्ष प्रसुतिकर्मी० अध्ययन अध्यापन भईरहेको छ । स्टाफनर्स तीव्र गतिमा गईरहेको छ । स्टाफनर्स १२० जना अध्ययन गरेर गईसकेका छन ्भने १२० जना अध्ययनको सिलसिलामा छन् । व्याचलर मिडवाफेरी १० कोटामा पहिलो वर्ष ६ जना र दोस्रो वर्ष १० जना अध्ययन गरिरहेका छन् । जुन कक्षा सञ्चालन गर्ने बीर अस्पताल, काठमाण्डौ यूनिभर्सिटी पछि तेस्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ । अर्को नर्सको सेवा त कर्णाली प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा सँगै जोडिएको छ । निकै प्रभावकारी हुदै आएको छ । त्यसैगरी, म जुम्ला बसेर नियाल्दा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा समेत थुप्रै नर्सहरुले निकै कष्ठका साथ काम गरिरहनु भएकोमा कदर गर्छु । कर्णालीमा चुनौति छिचोल्दै उज्योतिर हामी बढ्दैछौ ।
४. यहाँ नर्सिङ क्षेत्रका सम्भावना र चुनौति के के छन् ?
पहिलो कुरा त अध्ययनमा सिद्धान्त मात्रै भएर हुदैन, दक्षता चाहिन्छ । सेवा दिनुभन्दा पहिला स्किल ल्यावमा सीप सिकाउछन । शिक्षक दक्ष हुनुपर्छ । तालिम हुनुपर्छ । सेन्टरबाट अलि टाढा भएकाले केही समस्या छ । पहिला त जुम्ला जान भनेपछि मानिसहरु आउन चाहँदैनथे । अहिले प्रतिष्ठानको रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । प्रतिष्ठानमा रोजगारी हुन सोधिरहनेको संख्या बढी हुन्छ । अर्को अस्पतालमा नर्सिङ सेवा अझै महत्व धेरै छ । जहाँ बिरामी सँगको विषय हुन्छ । त्यहाँ नर्सले ज्ञान, सीप, आचरणको मान्यतालाई महत्वका साथ प्रयोग गर्न योजना र निर्देशन गरिरहनु पर्छ । त्यो हाम्रो अवसर र सम्भावना पनि हो । अहिले स्टाफनर्सको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ । कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका बढीअध्ययन गर्न आउनु हुन्छ । यसका साथै विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । धेरै त यही पढेर यही जागरि खाने काम पनि भईरहेको छ ।
५. अब थप नर्सिङ पेशा व्यवस्थित र स्तरीय गर्न के गर्नुपर्ला ?
नर्सिङ सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न पहिला त समय र परिस्थिति अनुसार शिक्षकलाई तालिम हुनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा हामी छ जना शिक्षकहरु छौ । अझै यसको योजना अनुसारको अस्पताल क्षेत्र बढाउनुपर्छ । शिक्षक विद्यार्थी आफैले आफ्नो पेशाको मान्यता र कदर थप बढाउदै जाने प्रयास गर्दैछौ । विज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गर्ने, नर्सिङ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा अभिवृद्धि गर्नेसमेत योजना रहेको छ । यसैगरी अब बिएनएस स्तरको अध्ययनको योजना पनि रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नीतिस्तरमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । यसैगरी अझै गाउँमा आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र ज्ञान सीपसहित प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
६. नीतिस्तरको प्रतिनिधित्व भनेको के हो ?
नीतिस्तरको प्रतिनिधित्व भनेको जहाँ नीति बनाईने, सूझाव दिएर परिर्वतन हुने हो त्यस्ता समितिहरुमा नर्सिङ प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । अझै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जस्तै कर्णाली प्रतिष्ठानको सिनेट, कार्यकारी समिति, यसले नेपालको संविधानले रक्षा गरेको सिद्धान्तको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ ।
७. अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
हैन । प्रतिस्पर्धी बजारमा आएको कोरपाटी अनलाईनलाई धेरै धन्यवाद । नर्सहरुले पुर्याएको योगदानको संरक्षण र कदर गर्ने सञ्चार माध्यमको ठूलो भूमिका छ । निरन्तर होस् ।